नेपालको आर्थिक विकासको आधार नै गाउ“ पर्यटनः डा. सुरेन्द्र भक्त प्रधानाड्ड - Sunrise Nepal
७ आश्विन २०७४, शनिबार ०६:२८ September 25, 2017
गाउ“ पर्यटनको अवधारणाका सुत्रधार डा. सुरेन्द्र भक्त प्रधानाड्ड गाउ“ पर्यटनका जन्मदाताको रुपमा समेत चिनिन्छन् । गाउ“ पर्यटन नेपालको मौलिक पर्यटन भएको र गाउ“ पर्यटनको विकासले मात्र समस्त नेपालको पर्यटनको विकास सम्भव हुने बताउ“दै आएको प्रधानाड्डले विदेशमा रह“दा समेत गाउ“ पर्यटनको अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्नु भएको थियो । हाल पर्यटन क्ष्ँेत्रमा त्यति सक्रिय नदेखिएका प्रधानाड्डस“ग सनराइज नेपालका प्रतिनिधीले भेटी गर्नु भएको कुराकानीको अंशः
सनराईजः गाउ“ पर्यटनबाट अलि टाढा भए जस्तो हुनु भयो नि, किन होला ?
प्रधानाड्डः म गाउ“ पर्यटनबाट टाढा त हुनै सक्दिन । म मिडियाबाट चाहीं अलिकति टाढा भएकै हो । गाउ“ पर्यटनबाट मानिसहरु अति नै प्रभावित भएर उनीहरु स्वस्फुर्त रुपमा लागे । मैंले युवापिढीं गाउ“ पर्यटनप्रति आकर्षित भए र उनीहरुको लगाव राम्रो रह्यो । अहिले गाउ“ पर्यटन स्थापित भइसकेको छ । म पहिलाको जसरी अब त्यति सक्रिय हुनु जरुरी छैन । मैंले सुर्खेतको दशरथपुर गाउ“मा गाउ“ पर्यटनको अवधारणा परिकल्पना गरी त्यहींबाट गाउ“ पर्यटनको प्रादुर्भाव भयो । पछि सिरुवारी, घले गाउ“ हु“दै अहिले नेपालका थुप्रै गाउ“मा गाउ“ पर्यटनको अवधारणा स्थापित भएको छ ।
सनराइजः अहिले तपाईंले सोचे अनुरुप गाउ“ पर्यटनको विकास भएको छ त ?
प्रधानाड्डः मैंले सोचे अनुरुप अभैm गाउ“ पर्यटनको अवधारणा सही तरिकाबाट कार्यान्वयन भएको छैन । यूवा पिंढीहरुले गाउ“ पर्यटनको शुद्ध विचारलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा अवधारणालाई तोडफोड गर्ने काम भएको
छ । गाउ“ पर्यटन भनेको होम–स्टेमा खुम्च्याइयो, जसबाट केही विकृतिहरु पनि आएको छ । शहरी क्षेत्रमा होम–स्टे सुरुवात गरेर विकृति आएको छ । होम–स्टे गाउ“ पर्यटनको एउटा अंग मात्र हो । गाउ“ पर्यटनमा जीवन्त संस्कृति छ । गाउ“ पर्यटनमा प्राकृतिक पर्यटन, सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनको समेत संयोग छ । होम–स्टे आपैंmमा नराम्रो होइन, गाउ“ पर्यटन र शहरी पर्यटनलाई स“गै विकास गर्न होमस्टे फलदायी भएको छ । तर होम–स्टेलाई राम्रोस“ग व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । होम–स्टेलाई घरवास पर्यटन भनेर आप्mनै मौलिक पहिचान दिनु पर्दछ ।
सनराइजः गाउ“ पर्यटनको अवधारणालाई जीवन्त दिन तपाईंले के सोच्नु भएको छ ?
प्रधानाड्डः गाउ“ पर्यटनको अवधारणालाई स्थापित गर्न मैंले आप्mनो पहलमा मोडेल गाउ“ बनाउने योजना बनाएको थिएं । तर अहिले नेपाली युवाहरु आपैंm स्वस्फुर्त रुपमा गाउ“ पर्यटनलाई स्थापित गर्न लागि परेका छन् । गाउ“ पर्यटनले आर्थिक उपार्जन गर्ने भएकाले यूवाहरु गाउ“ पर्यटनप्रति आकर्षित भएका छन् । सुरुमा गाउ“ पर्यटनको विरोधीहरुले यसलाई विगार्न चाहेका थिए । तर अधिकांस गाउ“का यूवाहरुले गाउ“ पर्यटनको फाइदा बुझेर यसलाई अगाडि बढाए । सुरुमा मैंले सिरुवारी गाउ“मा गएर गाउ“ पर्यटनको अवधारणालाई अगाडि बढाउ“दा राम्रो हुन्छ भनेर सिरुवारीले राम्रो विकास
ग¥यो । एकजना विदेशी टोनी पारले सिरुवारी मन पराएर प्रवद्र्धन गरे । उनले नेपाली महिलास“ग विवाह गरेर नेपालको गाउ“ पर्यटनको प्रवद्र्धन गरे ।
गाउ“ पर्यटन नेपालको मौलिक अवधारणा हो । यो विदेशबाट आयातित अवधारणा होइन । मैंले ललितपुरको चौघरे गाउ“मा जग्गा किनेर गाउ“ पर्यटनको नमूना गाउ“ बनाउन चाहन्थे । मैंले २२ रोपनी जग्गा किनेर अगाडि बढाउने सोच बनाएको थिएं । तर अहिले गाउ“ पर्यटनले नेपाली जनमानसमा जरो गाडि सकेको छ । तर अभैm त्यो ठाउ“मा म नमूना पर्यटन गाउ“ बनाउन चाहन्छु । गाउ“ पर्यटन नै नेपालको पर्यटन विकासको मेरुदण्ड हो ।
सनराइजः गाउ“ पर्यटनले अर्थतन्त्रको विकासमा कसरी सहयोग पु¥याउ“दछ ?
प्रधानाड्डः गाउ“ पर्यटन नै पर्यटनको आधार हो । नेपाली समाजमा जन्मिएको गाउ“ पर्यटन
अवधारणाले गाउ“को आर्थिक विकास त हुन्छ नै । यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समेत आधार हो । अहिले गाउ“ पर्यटनको
अवधारणा विदेशमा समेत पैmलिएको छ । सरकारले गाउ“ पर्यटन अर्थात् होम–स्टे सञ्चालन गर्न दर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । हालसम्म पा“च सय भन्दा बढीको दर्ता भइसकेको छ । गाउ“को स्वच्छ हावा–पानी र प्राकृतिक सौन्दर्यताले पर्यटकहरु गाउ“ पर्यटनप्रति अकर्षित भएका छन् । हामीले पूर्वाधारको विकास गर्नु जरुरी छ । नेपाली जनताको आर्थिक विकास गाउ“ पर्यटनबाट मात्र सम्भव छ । पर्यटनबाट नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा १७ प्रतिशतको योगदान छ । तर नेपाल सरकारले यो मानेको छैन । पर्यटनबाट नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशतको योगदान मात्र छ भन्ने गरिन्छ, यो गलत हो ।
अहिले यूवाहरु विदेशमा पलायन भएका छन् । यो देशको दुर्भाग्य हो । सरकारले यूवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्यायो तर त्यसको ठिक विपरित नेपाली यूवाहरु विदेशमा गएर रेमिट्यान्स भिœयाएका छन् भनेर लाहुरे अर्थतन्त्रको विकास भयो । यसले देशको आर्थिक विकास हु“दैन । यूवाहरुलाई देशमै स्वरोजगार दिने गाउ“ पर्यटनको अवधारणालाई
सरकारले अवलम्बन गरेर यूवालाई विदेशीनबाट रोक्नु पर्दछ । तब मात्र आर्थिक विकास सम्भव छ ।
५ जेष्ठ २०७५, शनिबार ०४:१० sunrise 0